विदेशको सीप स्वदेशमा प्रयोग | Epradesh Today
Homeफिचरविदेशको सीप स्वदेशमा प्रयोग
विदेशको सीप स्वदेशमा प्रयोग
हातमा सीप भयो भने बेरोजगार हुनुपर्दैन् । सीप भएको व्यक्तिले कही न कही कुनै व्यवसाय सञ्चालन गरेर आत्मनिर्भर भएको हुन्छ । एउटा यस्तै उदाहरण हुन् घोराहीका टंकबहादुर केसी र माइकल भण्डारी ।
१७ वर्ष पहिलो भारतको एउटा होटलमा खाना पकाउनेको काम गर्दै आएका भण्डारी त्यही सीपलाई स्वदेशमै प्रयोग गरेर राम्रो आम्दानी गर्न सफल भएका छन् । भारतमा रोजगारीको लागि धेरै समय बिताइसकेपछि स्वदेशमै केही गरौँ भन्ने उनको सोच आयो ।
‘दाङमा भर्खरै मात्र ससेजको परिकार भित्रिएको थियो, त्यो पनि बाहिर जिल्लाबाट ल्याउनुपर्ने’ भण्डारीले उद्योग स्थापना गर्नुपूर्व बनाएको योजनाबारे सम्झदै भने ‘आफूले भारतमा सिकेको सीप र बजारमा यसको माग बढी देखेपछि उद्योग स्थापना गर्ने योजना बनाएको हँु ।’
सुरूमा उनले बजार बुझे ससेजको माग कस्तो छ ? कहाँबाट ल्याईन्छ भनेर ? ससेज दाङमा उत्पादन नभएको र बाहिरी जिल्लाहरू बुटवल र काठमाडौँबाट आउने भएपछि उनले दाङमै उद्योग स्थापना गर्ने योजना बनाए । गत असार १ गतेबाट उनले उद्योग स्थापना गरेर सुरूको समयमा परिक्षणको लागि घोराहीका होटलहरूमा पु¥याए ।
सुरूमा नै बजारमा ससेजको प्रभाव सकारात्मक भएपछि माग पनि बढ्दै गयो । उनले उत्पादन गरेका ससेज घोराहीका प्रायः होटलहरूमा सप्लाई हुने गरेका छन् । भण्डारीका अनुसार विष्ट फुड्स चिकेन कवावमा चिकेन कवाव, चिकेन ससेज, सलमी, सलमी, कवावलगायतका विभिन्न आईटमहरू उत्पादन हँुदै आईरहेका छन् । दाङमै स्थापना भएको र ताजा पाइने भएकाले माग बढ्दै गएको उनले बताए ।
कुनै विवाह, पार्टी होस् वा कुनै कार्यक्रम नै किन नसहोस् । मासुको परिकारसँगै ससेजको आइटम पनि उत्तिकै महत्व बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समयमा सबैको रोजाई ससेजको माग बढ्दै गएको हो ।
होटल आइटममा बढी माग हिजोआज ससेजको बढ्दै गएको छ । हरेक परिकारसँग मिलाएर खान मिल्ने ससेज सबैको रोजाई बन्दै गएको उनको भनाइ छ । दाङमा ससेजको माग बढ्दै गएपछि घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १६ स्थित सर्रामा ससेजको उद्योगसमेत खोलिएको छ ।
तीन कठ्ठा जग्गामा विष्ट फुड्स चिकेन कवावको उद्योग स्थापना गरिएको हो । २० लाखको लगानी गरेर स्थापना गरिएको उद्योगमा ससेज उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने भ्याकुम,
सिलिङ मेसिन, फिलर, मिक्सचर, ब्याज प्रिन्ट, ठूलो फ्रिज दुईवटा, स्मोकिङ चुलो दुईवटा लगायतका मेसिन तथा सामग्रीहरू रहेको अर्का सञ्चालक टंक बहादुर केसीले बताए । केसी पनि भारतमा रोजगारीको सिलसिलामा ससेज बनाउने तरिका सिकेर नेपाल आएका हुन् । भण्डारी र केसीको संयुक्त लगानीमा उद्योग स्थापना गरेका हुन् ।
अहिले उनीहरूलाई बाहिर जिल्लाबाट आउने ससेजसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएको छ । ‘बाहिर जिल्लामा ठूलो उद्योगमा उत्पादन गरिएका ससेज सस्तोमा बिक्री भईरहेको छ’ उद्योग सञ्चालक केसीले भने ‘यहाँ गुणस्तरभन्दा पनि सस्तो हेरिदो रहेछ, जसले गर्दा बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएको बताए ।
गुणस्तर खोज्नेको क्रम बढ्ने पनि आशा रहेको उनले बताए । ‘हामीले गुणस्तरमा कम्प्रोमाईज गर्दैनौँ’ उनले भने ‘हामीले उत्पादन गरेका ससेजका परिकारमा शंका लागेमा चेक जाँच गरेर मात्र खाने र खाद्य गुणस्तरमा लैजानसमेत सुझाव दिन्छौ ।’ अहिलेसम्म बजारमा ससेजको गुणस्तरमा कुनै नकारात्मक टिप्पणी नआएको उनले बताए ।
दैनिक ८० केजीसम्म ससेजको डिमाण्ड बढ्दै गएको उनले बताए । तर ग्राहकको मागअनुसार ससेज पु¥याउन नसकेको उनको भनाइ छ । ससेजमा कोरेन्डर, जिन्जर पाउडर, वनियन पाउडर, दालचिनी, ल्वाङ, कालो ईलाईची, जाइपत्री, जाईफल, मेथि कस्तुरी, मस्टाड पाउडर, ब्ल्याक पिपर मरिच, हवाईट पिपर मरिच लगायतका सामग्रीहरू प्रयोग गरिएको उनले बताए ।
स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएका सामग्रीलाई प्राथमिकतामा दिनसमेत अनुरोध गरेका छन् । गुणस्तर चिन्हसमेत पाईसकेकाले ढुक्क भएर प्रयोग गर्न समेत अनुरोध गरेका छन् ।